‘Mihotakotaka ny Tany’ no Antony Nisamboran’ny Manampahefana Ethiopiana an’i Befeqadu Bilaogeran’ny Zone9 · Global Voices teny Malagasy
‘Mihotakotaka ny Tany’ no Antony Nisamboran'ny Manampahefana Ethiopiana an'i Befeqadu Bilaogeran'ny Zone9
Voadika ny 15 Novambra 2016 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny English, Magyar, Swahili, Español, English
mpikamban'ny Zone9 mifaly tamin'ny famotsorana an'i Befeqadu Hailu (faharoa avy any ankavia, manao fehitenda) tamin'ny Oktobra 2015. Sary nozarain'i Zelalem Kibret tao amin'ny Twitter.
Nosamborina tamin'ny 10 novambra 2016 i Befeqadu Hailu, iray amin'ireo feo fanta-daza indrindra ao amin'ny tontolo tampenam-bavan'i Ethiopia. Nalain'ny manampahefana avy ao an-tranony maraimbe i Befeqadu ary nampidiriny tao amin'ny toerana fitazonana tao amin'ny komisarian'ny polisy teo akaiky teo. Nandany ny tontolo alina tao izy ary nafindra tao amin'ny komisarian'ny polisy tamin'ny tanàna iray manodidina antsoina hoe Kotebe.
Mpikambana ambony ao amin'ny fiarahan'ny blaogera Zone9 sady mpandray anjara ato amin'ny Global Voices, mavitrika ao amin'ny tontolon'ny blaogy sy ny Twitter i Befeqadu. Raha nanambara ny fisian'ny firenena latsaka an-katerena ny governemanta Ethiopiana, dia nanoratra izy hoe:
Ankehitriny ny governematan'i Ethiopia nanambara ny ‘tany mihotakotaka’ maharitra enimbolana. Noho izahay ‘ahiahiana lalandava’ noho ny feonay manivaka, dia matahotra indrindra noho ny taloha izaho sy ny namako. Toy ny fahasahisahiam-poana izany mitsikera ny governemanta izany aty. Ankoatra izany, io fanambarana io dia manome zo ny governemanta hisambotra anay na dia tsy misy antony manokana. Mamoaka ity naotiko manokana ity aho ho toy ny blaogy satria manahy aho fa mety ho voasambotra tsy ho ela. Raha izany dia tiako ny olona hamaky ahy ary hahatakatra ahy. Tiako ihany koa ny olona hahatakatra ireo mitovy amiko hahatakatra ny fihetsiketsehana famoizam-po mitranga eto Ethiopia. Fikasana hiavo-tena amin'ny mahaolombelona manana fahamendrehana izany.
Tsy navoakan'ny manampahefana ny antony nisamborana an'i Befeqadu, saingy niteny taminy ry zareo fa tadiavin'ny miaramila manana ny grady ambony indrindra (izay fantatra amin'ny toeran'ny komandy) izay napetraky ny ‘tany mihotakotaka’ izy. Taty aoriana dia nolazaina taminy fa ny antsafa nataony tao amin'ny Voice of America amin'ny teny Amharika momba ny ‘tany mihotakotaka’ ao Ethiopia no antony nisamborana azy, ary izany no na iampangana azy na hanomezana azy fanazara-tena “ara-panabeazana”.
Nozarain'i Zelalem Kibret, namany sady mpiara-manoratra aminy ao amin'ny Twitter ny feo manaikitra maharitra dimy minitra avy amin'ny Voice of America lazainy fa antony voamarina nisamborana an'i Befeqadu. Amin'ny fiteny Amharika izany.
Ny dimy minitra nisamborana an'i Befkadu Hailu
Nitranga tao amin'ny faritra Oromia ao Ethiopia ny fihetsiketsehana hatramin'ny Novambra 2015 ary niparitaka manerana ny firenena tao anatin'ny volana vitsivitsy izay, ary takian'ny mpanao fihetsiketsehana ny fizakan-tena bebe kokoa, ny fahafahana ary ny fanajana ny mari-panondroana ara-poko ny vahoaka Oromo, izay nizaka fanilikilihana sy fanenjehana tao anatin'ny 25 taona farany. Nampiasa hery mahafaty tamin'ny mpanao fihetsiketsehana ny ny governemanta. Tamin'ny volana Oktobra lasa teo, nitatitra famoizana ain'olona manodidina ny 600 ny Kaongresy Federalista Oromo (OFC), antoko mpanohitra.
Hatramin'ny nanambaran'ny governemanta tamin'ny fomba ofisialy ny “fahalatsahana ankaterena” tamin'ny volana lasa teo, dia voabahana hatrany ny media sosialy sy ny serasera aterineto am-pinday [mg], napetraka manerana ny firenena ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, ary mendrika fanasaziana izay endrika fitenenana na fihetsika milaza fanoherana ny governemanta.
ireo lbaogeran'ny Zone9 Atnaf Berahane, Natnael Feleke ary Abel Wabella manandra-peo amin'ny famitsorana an'i Befeqadu tamin'ny taona 2015. Sary nozaraina fatratra tao amin'ny Twitter.
Noho ny fijoroany mandrakariva hanandram-peo hiaro ny zon'olombelona sy ny fampanjakana ny lalàna ao Ethiopia, dia nandany ny ankamaroam-piainany tany am-ponja i Befeqadu tao anatin'ny telo taona farany. Efa imbetsaka nosamborina sy niatrika fitsarana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny Famahanam-bilaogy iraisana Zone9, ity lehilahy 35 taona ity. Nogadraina izy ireo hatramin'ny Avrily 2014 ka hatramin'ny Oktobra 2015 ary avy eo nampangaina tamin'ny Lalàna Enti-Miady amin'ny Fampihorohoroana.
Nakarina ny didim-pitsarana ireo mpikambana dimy ao amin'ny Zone9, ary anisan'izany i Befeqadu, tamin'ny Avrily 2016. Efa nametraka hamoaka didim-pitsarana momba ity raharaha ity ny Fitsarana amin'ny 15 Novambra, saingy efa imbetsaka ny nanemorana ny fotoana hamoahana izany.
Antenaina hamoaka didim-pitsarana efa nandrasana hatry ny ela, amin'ny raharaha Zone9ners ny Fitsarana Tampony rahampitso
Saingy tsara ambina amin'ny maha-panoratra arahi-maso akaiky azy i Befeqadu ao Ethiopia. Efa nandany telo andro tao amin'ny komisariàn'ny polisy iray ao an-toerana ihany koa i Natnael Feleke, izay mpikambana ao amin'ny firaisankina ihany koa, tamin'ny oktobra lasa teo rehefa nosamborina noho ny firesahana mafy tamin'ny mpiara-miasa aminy ny anton'ny fifanosehana izay nahafatesana olona anjatony tamin'ny volana Septambra lasa teo.
Tsy mbola fanta-daza i Seyoum Teshome, blaogera mavitrika iray izay nosamborina tamin'ny Septambra lasa teo. Efa ho roa volana taorian'ny nisamborana azy izao dia mbola tsy namoaka ny antony nisamborana azy hatrany na izay mety hiampangana azy ny manampahefana.
Miara-mijoro ho firaisankina amin'i Befeqadu ny fikambanana Global Voices. Mandrisika ny amin'ny famoahan'ny manampahefana Ethiopiana azy avy hatrany izahay. Fantaro bebe kokoa ny momba an'i Befeqadu sy ireo bilaogeran'ny Zone9.